Fiarovana ny vokatra - Potatoes News
Lisitra fizarana fizarana ovy AHDB hanamboarana ny fivarotana ovy
Ovy matanjaka; fahadisoam-panantenana izao fa manantena ny ho avy
Fotoana ho an'ny Hydrazide Maleic (MH)?
Manimba ny olana eo amin'ny ovy ny Wireworm amin'ity taona ity
Ny fanjaitra tariby dia olana mitombo ao anaty ovy. Amin'ny toerana maro dia maro ny fahasimbana hita amin'ny voly ao amin'ny ...
Fahasalamana ovy: fandrahonana mifandraika indrindra sy ny fomba hiatrehana azy ireo
Ny paikady fanadiovana dia manomboka amin'ny asan'ny tany sy ny safidin'ny karazan-ovy. Mety ny mamakafaka raha azo atao ...
Ireo mpamboly ovy ao amin'ny PEI dia mitodika any amin'ny teknolojia hanampiana azy ireo hanaraka ny tsimok'aretina avy amin'ny tara-pahazavana sy aretina hafa azo avy amin'ny rivotra ...
Fanamby iray tokoa ny fisian'ny voangory ovy any Colorado. Indrindra ho an'ireo mpamboly voajanahary, izay ...
Voangory ovy any Colorado - bibikely mahatohitra marika
Ny Colorado Potato Beetle (CPB) dia mbola bibikely ovy bibikely voalohany manerantany. Fahavalo mahery setra; ...
Wageningen mpahay siansa: rehefa miditra amin'ny zavamaniry i Phytophthora
Ny infestans patygen Phytophthora malaza ratsy dia nahatonga mosary tany Irlandy sy ny faritra hafa tany Eropa Andrefana tamin'ny taonjato faha-19 sy ...
Lisitry ny lozam-pifamoivoizana tara ho an'ny fiarovana mandritra ny vanim-potoana
Eugenia Banks ao amin'ny birao ovy any Ontario dia namorona loharanom-pahalalana amin'ny tara-pahazavana, nohavaozina ho an'ny vanim-potoanan'ny 2021.
Agénatera mifehy ny faritry ny hala amin'ny voly ovy (safidy bio)
Tamin'ny taon-dasa, ny tantsaha mpiompy Roelof Kunst dia nahazo traikefa tamin'ny mite neoseiulus californiaicus, na Spical, ho mpanara-maso ...
Azoles ambanin'ny mikraoskaopy eropeana
Ny azoles dia be mpampiasa amin'ny fungicides amin'ny fambolena azo zakaina.
Ny asan'ny mpitsikilo Breeders Trust dia misambotra orinasa ovy voa mifangaro amin'ny ovy latabatra
Ny ovy dia 'indostrialy mbola miliara dolara' any Nouvelle-Zélande, hoy i Potatoes NZ